Onu isi oru a na emere na aru oru 320 Billion Lira | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulOnu ego ejiri mee atụmatụ ijeri 320 ijeri Lira
Onu ego ejiri mee atụmatụ ijeri 320 ijeri Lira
13 / 01 / 2020 34 Istanbul, General, Ụgbọelu, hyperlinks, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
Ego efu na emehe ihe ruru ijeri pound
Onye isi oche nke President Tayyip Erdo'an dịka akọwapụtara na atụmatụ nke ọwa na Istanbul ka ike nke Fatih Project n'afọ ndị na-adịbeghị anya, Yavuz Sultan Selim Bridge, Osmangazi Bridge, ọdụ ụgbọ elu 3 na ụlọ ọgwụ obodo nọ n'okpuru ntụpọ. Onu ogugu ego nke itinye ego 5 bu ego ijeri 320.
Oğuz Gündoğdu si BirgünNyochaa ọrụ ise a rụzuru na afọ ndị na-adịbeghị anya na-agbaso atụmatụ Kanal Istanbul. Ndi oru ngo ndi eweputara n’aha ha dika “oru igba-a” ka edeputara dika ndia:
Emeputara Fatih Project n’afọ 2010 ma tinye ego ruru ijeri naịra asatọ. Dị ka atụmatụ ahụ si dị, ụmụ akwụkwọ niile nke mba a ga-akụzi mbadamba ihe n’ime afọ anọ. Rally squires "oru ngo nke narị afọ," enye ama webatara ngo a mbụ bịara burukwa na-adịghị akwụ ụgwọ oge. Mgbe ahụ, na Septemba 8 Birol Ekici, onye osote onye na-ahụ maka ndị na - ahụ maka ndị na - ahụ maka agụmakwụkwọ mba. Oru ngo a, nke aga emezue n’aho n’aho n’aho n’adiri n’aho n’aho n’ankari n’aho n’ise n’aho n’ise n’aho 500. Ka ọnwa nke asatọ dị na Jenụwarị 4, 2013, a ghọtara na a na-eme ihe ọmụmụ kọmputa ahụ na kaadiboodu na Diyarbakır.
Afara Bosphorus, nke mepere na 1974, riri $ 21 nde na Fatih Sultan Mehmet Bridge, nke mepere na 1988, riri $ 125 nde, ebe e wuru Àkwà nke 3 na $ ijeri $ 3. Agbanyeghị, ọkara nke ihe nnabata akwa ahụ bufere ndị China maka nde euro 658. 'Otu akpa ego agaghị apụta na penny' a na - akpọ ọrụ ahụ mgbe emepere mmeghe nke mmefu ego adịghị anya mgbe aghọtara mmeghe ahụ. Dabere na nzaghachi nke General Directorate of Highways, Honorary Adıgüzel, CHP, ụgbọ ala nde 135 nde 3 gafere n’agba nke atọ, nke bụ ụgbọ ala 2016 puku kwa ụbọchị, site na Septemba 2019 ruo June 41. N'ihi ya, enwetaghị ike n'ụzọ atọ nke akwụkwọ ikike ụgbọ ala enyere ihe dị ka afọ atọ. Ebe ọ bụ na ọnụ ahịa akwa mmiri ahụ kemgbe mmalite nke nde 805 nde kwa ụbọchị na nkezi.
E mepere ọdụ ụgbọ elu nke atọ na Ọktoba 29, 2019 mere emechi Airportgbọ elu Atatürk. Emechichara mmechi a n'ọdụ ụgbọ elu nke Ataturk ruo na Jenụwarị 3, 3 iji rụọ ọrụ ikike TAV 2021 nde euro ka a ga-akwụghachi ụgwọ. Hamdi Topçu, onye isi ụgbọelu Turkish n’agbata afọ 389 na 2010, kwuru n’akwụkwọ ya ‘Site Mpaghara ruo Global’ na ọ bụrụ na e wuru okporo ụzọ ọzọ ae rutere n’Ọdụ Atgbọelu Atatürk, ọ ga-ezuworị ruo 2015.
Osimiri Osmangazi nyere ụlọ ọrụ ahụ na-ekwe nkwa mbugharị ụgbọ ahụ na dollar dollar ghọtara. Onye isi nchịkwa Otoyol AS Bülent Esendal, onye na-agba mmiri maka ọnụ ọgụgụ akwa, nke pasent 2019 na-abawanye mgbe ị na-abanye na 50, kwuru na ha enweghị ike ịgbanwe ọnụego n'ihi ọdịiche nke ọnụego dollar. N'afọ 2018, ọnụ ego ụgbọ ala ji ebu ihe ruru paịlị 72, ebe ego a ruru kilogram 2019 na 103 na pound 2020 na 118. Maka 2018 naanị, ọnụahịa nke Osmangazi na Yavuz Sultan Selim Bridges na mmefu ego bụ ijeri 1,8 TL dịka ozi nke Minista Minista Cgbọ njem Cahit Turhan nyere. Ọnụ ego a bụ ihe dị ka ugboro abụọ na ntinye akwụkwọ onye isi ala 2018.
Hosplọ ọgwụ obodo
Emere ka ọha na eze mata ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ a n’afọ 2017. Onye isi ala Erdoğan kwuputara ụlọ ọgwụ obodo ahụ site na ịsị, alim Nrọm nke afọ 14 bụ ọrụ m hụrụ n'anya. ” Na 2018 na 2019, ụlọ ọgwụ obodo, nke mepere otu mgbe, gosipụtara na mmefu ego na obere oge dị ka ọrụ nzuzu ndị ọzọ. Ka ọ na-erule njedebe nke afọ 2019, ọnụ ahịa afọ iri abụọ na ise nke ụlọ ọgwụ n’obodo ọrụ karịrị $ 25 ijeri. Ego a buru oke ibu iji kwado ulo oru ulo ogwu 142. Nkatọ na mgbakwunye ntị, mgbe ahụ, "ọ dị, merụọ ahụ," ọ gara ikwu. Minista na-ahụ maka ahụike Fahrettin Koca kwuru nkwupụta banyere nkatọ ndị a na Nọvemba 800, 26: “N'echiche anyị, ụlọ ọgwụ abụghị ụlọ ọrụ azụmahịa mana ụgwọ ụlọ anyị na-akwụ, ọ bụ na anyị agaghị akwụ ya?
Ọrụ ụgbọ mmiri Cyprus
envisaging ndokwa nke mmiri si na Turkey na Northern Cyprus "na narị afọ oru ngo" a na-akpọ oghere nke oru ngo e mere na October 17, 2015. Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan na Prime Minista Ahmet Davutoglu gara ememme ahụ na Mersin. Davutoğlu kọwara ọrụ ahụ dịka ọ bụ ọrụ zuru ụwa ọnụ, wee sị, uz Anyị na-arụ nnukwu mmiri na ụwa. Ọ bụ mba nwere ihe niile, ma bụrụ mba nwere ihe niile .. Emechara na mkparịta ụka a na-elekwasị anya, ọrụ ahụ gbawara, ozugbo afọ ise. 5 kilomita n'ụsọ oké osimiri Anamur gbawara pọpụl ebuputere. Enwere ike ịhụ nfuli miri emi dị mita 5 n'ogologo osimiri. Mmiri na-asọ site na ọkpọkọ. Ihe oru ngo a emeela ijeri kilogram 250.
Onu ogugu onu ahia: ego ijeri 320
1-Fatih oru ngo:
Ego ulo oru mbo: ijeri kilogram 8,5
Nke Abụọ-Yavuz Sultan Selim:
Onu ahia ego itinye ego: ijeri euro 3,5
Ego nke taa: ijeri kilogram 23,5
3- Osimiri Osmangazi:
Ego ulo oru mbo: ijeri 2,5
Ego nke taa: ijeri kilogram 17
4- 3. Airportgbọ elu:
Ọnụ ego itinye ego: $ 35 ijeri
Ego nke taa: ijeri kilogram 206,5
5- 20 Obodo Hospitallọ Ọgwụ:
Ọnụ ego itinye ego: $ 11 ijeri
Ego nke taa: ijeri kilogram 64
Ugo oru ngo ndi mmadu ga-eji kwado ya
Ego 1 Kwa Afọ nke Osmangazi Bridge gaa na 1.3 Billion Lira
2018 Ga-abụ Afọ Afọ Ndị Nzuzo
Ego Başkentray Project 600 Million Lira
Onu ogugu ubochi nke Osmangazi Bridge na steeti bu 3 nde pound
Ogwe 320 tram 4 na-arụ ọrụ n'otu oge, gafere akwụkwọ akwụkwọ ụwa
Nleba anya Omuma: N’eji nbudata, nbudata nke 320.000.pcs traves dikwa n’etiti Polatlı na Sincan…
320 oge ọzọ na Metrobus | Istanbul
A na-atụba ntanaka 320 puku tọn na mkpara ahụ
Ugo nke uzo Eurasia 1,2 ijeri dolla
3. ego nke ọdụ ụgbọ elu ụgbọ elu ga-eru 5 ijeri TL
Ụgbọ okporo ígwè Ankara-Izmir High Speed ​​na-efu 4.2 ijeri TL
Topbaş: "Ọnụ ego ndị na-aga n'ihu na Istanbul bụ 36 ijeri"
Akwụ ụgwọ nke nzuzu oru ngo
Akwụ ụgwọ maka ọdụ ụgbọ elu Istanbul
Project nke narị afọ
Akwụ ụgwọ nke Osmangazi Bridge
Akwụ ụgwọ nke akwa Yavuz Sultan Selim
Konya tinye itinye aka na ọgụgụ isi na ntụgharị obodo